Bangaphezulu kwabangu-90 abazovela enkantolo | News24
Bangaphezulu kwabangu-90 abazovela enkantolo
Johannesburg - Bangaphezulu kwabangu-90 abantu, okubalwa kubona nezingane, okulindeleke ukuba bavele eNkantolo yeMantshi eKagiso ngoMsombuluko ngamacala okudala uthuthuva emphakathini nokutholakala nempahla eyebiwe kulandela ukuhlaselwa kwezitolo zabokufika.
Okhulumela amaphoyisa uLt-Gen Solomon Makgale uthe bangu-178 abantu ababoshiwe ngamacala odlame oluqale ngemuva kokudutshulwa kubulawe umfana oneminyaka engu-14 ubudala, uSiphiwe Mahori ngenyanga odlule.
Funda nalolu daba: Ingane ishone umama eyotapa naye - Abazibonele.
Umufi kwakusolwa ukuthi wayehamba nabafana abebeyophanga isitolo sowaseSomalia ngoMsombuluko.
UMakgale uthe abantu abangu-83 bavele eNkantolo yeMantshi eProtea kanti bazogcinwa esitokisini kuze kube uJanuwari 28 noma 29.